दैलेख : दैलेखको मालिका माध्यमिक विद्यालयमा एक शिक्षकको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको छ । गुराँस गाउँपालिका–८ घर भएका करिब ४१ वर्षीय सामाजिक विषय पढाउने शिक्षक नगेन्द्र विसीको सोमबार राति घाँटी रेटेर हत्या गरिएको हो ।
विसी सोमबार राति ११ बजेसम्म छोटेपोखराको एक किराना पसलमा बसेको र त्यसपछि घटना भएको हुनसक्ने स्थानीय भुपेन्द्र ओलीको अनुमान छ ।
मंगलबार बिहान दुध पुर्‍याउन आएका स्थानीयहरुले स्कुलको बराण्डामा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र शंकास्पद २ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको दैलेख प्रहरी प्रमुख अनुप श्रेष्ठले मध्यान्हलाई बताए ।
प्रहरीले विसीको शव पोष्टमार्टमका लागी जिल्ला अस्पताल दैलेखमा पठाएको जनाएको छ ।
काठमाडौं : संखुवासभाको मादी-१ मा ६ जनाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई सार्वजनिक गरेको छ ।
वडा नम्बर १ का तेजबहादुर कार्कीसहित ६ जनाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले लोकबहादुर कार्कीलाई सार्वजनिक गरेको हाे ।
भतिज नाता पर्ने लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिसकेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरमा पत्रकार सम्मलेन गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
आफूमाथि गरेको अपमानको बदला लिन सुरुमा तेजबहादुरको हत्या गरेको र त्यसलाई लुकाउन अन्यको हत्या गरेको बयान उनले दिएका प्रहरीले जनाएकाे छ ।
शुक्रबारदेखि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका उनले शनिबार बिहान घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आफूले तेजबहादुरलाई मात्रै हत्या गर्ने योजना बनाएको भए पनि अरुले देखेपछि घटना लुकाउन थप हत्या गरेको उनले स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गत सोमबार उम्लिङमा तेजबहादुरसहित उनकी ८४ वर्षीया आमा पार्वता, ५८ वर्षीया श्रीमती मनमाया, २५ वर्षीया बुहारी रञ्जना, १० वर्षीय नाति दीपक र ५ वर्षीया नातिनी गोमाको हत्या भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को विशेष टोलीले चलाएको संयुक्त अप्रेसनले प्रहरी दोषी नजिक पुग्न सफल भएको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक रुगम कुँवर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो ।
बालगृहमा बस्दै आएकी १२ वर्षीया बालिका बलात्कृत, वडा अध्यक्षको छोरामाथि आरोप
रुकुम पश्चिम : रूकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका-११ स्थित सिस्ने हिमाल बालगृहमा बस्दै आएकी एक १२ वर्षीया बालिकालाई वडा नम्बर १० का वडाअध्यक्ष तथा बालगृह सञ्चालकका छोरा कुस्माकर चनाराले बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ ।
रवि नामले चिनिने कुस्माकर चनाराले आफूमाथि पटकपटक बलात्कार गर्दै आएको पीडित बालिकाले जनाएकी छन् । उनले मध्यान्हसँग भनिन्, 'बाहिर कतै हल्ला फिजाएमा,अरु साथिभाइसँग भनेमा तँलाई मार्छु भन्दै ममाथि निरन्तर बलात्कार भयो ।'
आठबीसकोट नगर अस्पतालमा गरिएको गर्भपरीक्षणको स्वास्थ्य रिपोर्टमा ती पीडित बालिकाको पेटमा साढे २ महिनाको गर्भ रहेको खुलेको छ । न्यायिक समितिमा उजुरी दिएपछि पीडित बालिकाले भदौ १९ गते गर्भ परीक्षण गरेकी हुन् । उनले भदौ २० गते नगरपालिकाको न्यायिक समितीमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यस लगत्तै नगरपालिकाका प्रमुख गोर्ख बहादुर केसीले दोषीलाई कानून बमोजिमको कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमलाई पत्राचार गरेका थिए । प्रशासनले आइतबार नै प्रहरीलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय आठबिसकोटका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रशुराम चौधरीका अनुसार बाल गृह सञ्चालक सुनिता चनारा र वडाअध्यक्ष गंगाराम चनारालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा झिकाइएको छ । पीडित बालिकाको जाहेरीपछि आरोपी कुस्माकरको खोजी कार्य भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।
आठबीसकोट नगरपालिका- ११ स्थित सिस्ने हिमाल बालगृहमा बस्दै आएकी ती बालिकाले बालगृह सञ्चालकका छोराले आफूलाई बलात्कार गरेको, वडा अध्यक्ष गंगराम चनाराले यौन शोषण र उनकी श्रीमती सुनिता चनाराले शारीरिक यातना र श्रम शोषण गर्दै आएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन् ।
जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिका -११ मा सञ्चालित सिस्ने हिमाल बालगृहमा २०७४ सालमा भर्ना गरिएकी ती बालिका दुई वर्षदेखि निरन्तर बलात्कारको शिकार बन्दै आएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
पीडित बालिकाले दिएको जाहेरीमा २०७७ साल चैतको अन्तिममा लकडाउनको समयमा बालगृह सञ्चालिका सुनिता चनाराले आफ्नो घरमा लिएर घरायसी कामकाजमा लगाउने गरेकी थिइन् । गत भदौ १७ गते आफू एक्लै कोठामा पढिरहेको मौका छोपी वडा अध्यक्ष गंगाराम चनाराले नराम्रो नियतका साथ टाउको थिचेर कानमा औंला राखेर यौन शोषण गरेको पीडित बालिकाले बताएकी छन् ।
'जनप्रतिनिधिको घरभित्रसमेत बालिका सुरक्षित नहुनु दु:खको कुरा हो,' स्थानीय तेजेन्द्र बटालाले मध्यान्हसँग भने, 'यो घटनाको मुख्य योजनाकार वडाअध्यक्ष हुन् । उनको मिलेमतोमा नै बालिका बलात्कारको शिकार बनेकी हुन् । बालगृह जस्तो पवित्र ठाउँमा संरक्षक मानिनेबाटै बलात्कार हुनुले जनप्रतिनिधिको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने यस्ता बालगृह तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।'
अनाथ, असहाय बालबालिकाका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको बालगृहमा बलात्कार, यौनशोषण, शारीरिक यातना दिने जस्ता जघन्य अपराधका कार्य भैरहेको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
भन्सार छलेर ल्याइएको सामान बरामद
रौतहट : प्रहरीले रौतहट सिमानाकाबाट भन्सार छलि गरेर ल्याइएको सामान बरामद गरेको छ । प्रहरी चौकी बंकुल र अस्थायी प्रहरी पोष्ट लौकाहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बौधीमाई नगरपालिका वडा नं. ७ भकुवा खोलाबाट युरिया मल, भारतीय नम्बरको मोटरसाइकल, कपडा बरामद गरेको हो ।
उक्त सामान १ लाख ३३ हजार ५९० रुपैयाँ बराबर रहेको र आवश्यक कारवाहीको लागि गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
दार्चुला : दार्चुलामा बालिका बलात्कारको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नौगाड गाउँपालिका ४ सिप्टीका स्थानीय २५ का महेशसिंह ठगुन्ना रहेका छन् । ठगुन्नाले यहि भदौ १५ गते राति मार्मा गाउँपालिका ६ पत्थरकाडामा गौरा पर्व हेरेर घर फर्किने क्रममा एक बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा लागेको जिल्ला प्रहरी दार्चुलाका सूचना अधिकारी एबं प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्दले मध्यान्हलाई बताए ।
गौरा हेरेर घर फर्कने बेला ती युवकले मौरेडाडा भन्ने स्थानमा बालिकामाथि बाल यौन दुरुपयोग गरेको पीडित पक्षको आरोप रहेको उनले बताए । बालिकाका बुबाले पिडकका नाममा शुक्रबार दिएको जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरी बाल यौन दुरुपयोग अभियोगमा मुद्दा दर्ता भइ अनुुसन्धान थालिएको उनले बताए । अनुसन्धान गर्न दार्चुला जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरिएको सुचना अधिकारी चन्दले बताए । आरोप प्रमाणित भए ति युवकलाई तीन वर्ष कैद तथा ३० हजार जरिवाना हुने बताइएको छ ।
रामपुर (पाल्पा) : पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका निवासी ११ वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।
रिब्दिकोट गाउँपालिका ६ बस्ने २५ वर्षीय हरी भन्ने हर्कबहादुर विकलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
आरोपित युवकले बालिकालाई गत भदौ १५ गते विहान करिब २ वजेको समयमा करणी गरेको सुचना बिहीबार पाए लगत्तै प्रहरीले खोजतलासी गरी युवकलाई पक्राउ गरेको हो । घटनाबारे आरोपित विकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रौतहट लागूऔषध प्रकरणः एसएसपीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन
रौतहट : रौतहटमा, लागूऔषध काण्डको पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । पत्रकारलाई फसाउनकै लागि प्रहरी अधिकारीको संलग्नतामा लागूऔषध मोटरसाइकलमा राखिएको सीसीटीभी फुटेजबाट सार्वजनिक भएपछि प्रहरी मुख्यालयले छानबिन थालेको हो ।
एसएसपी कृष्ण कुमार महतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्तबहादुर कुँवरले बताए । गत साउन ३२ मा पत्रकार मोहम्मद मोजिबुल्लाह आफ्नो एक साथीसँग होटल ग्रिन पुगेका थिए । त्यहाँ उनले बाहिर पार्किङ गरेको मोटरसाइकलमा जिल्लाका दुई जना सादा पोसाकका घुमुवा प्रहरीले अन्य दुई जनालाई प्रयोग गरी लागूऔषध राख्न लगाएको सीसीटीभीको फुटेजमा देखिएको छ ।
रौतहट एक्सप्रेसका पत्रकार मोजिबुल्लाहलाई होटलबाट निस्केको केही बेरमै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि आफ्नो बयान एउटा भए पनि प्रहरीले अर्को बयान लेखेको र अपशब्द प्रयोग गरी गाली गरेको मोजिबुल्लाहले बताएका छन् । सीसीटीभी फुटेज बाहिरिएपछि प्रहरी अधिकारीको कर्तुत बाहिर आएको हो । हाल प्रहरीले पत्रकार मोजिबुल्लाहसँगै उनका साथीलाई रिहा गरिसकेको छ । साथै घटनामा संलग्न प्रहरी सहायक निरीक्षक उदयप्रसाद यादव र प्रहरी जवान मनोज साहलाई निलम्बन गरिएको छ ।
लागूऔषध राख्ने स्थानीय धिरज यादव र जितेशकुमार यादवलाई पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीले उक्त घटनामा पत्रकार महासंघको रौतहट शाखाका सहसचिव सञ्जय सहनीको पनि संलग्नता रहेको दाबी गरेको छ ।
किन फसाइयो पत्रकारलाई
पत्रकार मोजिबुल्लाहले जिल्लामा प्रहरीबाट हुने अनियमितताको समाचार लेख्दै आएका थिए । उनका कारण प्रहरीको एउटा समूह असन्तुष्ट थियो उनीहरु आफ्नो गलत पक्षको उजागर गर्ने मोजिबुल्लाहलाई तह लगाउन चाहन्थे । अर्कोतर्फ मोजिबुल्लाह त्यहाँकै स्थानीय एनजीओ चलाउने अन्जु झासँग कुनै समय नजिक थिए । पछिल्लो समय उनी झाबाट टाढा भएका थिए झा अबको स्थानीय तहको चुनावमा ईशनाथको मेयर पदका लागि प्रमुख दाबेदार हुन् । हाल ईशनाथको मेयरमा सन्तोष मेहता छन् ।
झाको सम्भावना बढ्दो देखेपछि मेयर मेहताले उनलाई बद्नाम गराउन चाहेको र त्यसका लागि मोजिबुल्लाहलाई ‘बकरा’ बनाएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अर्का पत्रकार सञ्जय सहनी समेत झासँग नजिक छन् । उनी झासँगै सहकार्य समेत गर्दै आएका छन् । त्यसैले मेहताले प्रहरीसँग मिलेर सहनीको प्रयोग गरी मोजिबुल्लाहलाई फसाउन लगाएको स्रोतको भनाइ छ । यसमा सहनी फसेमा मेहतालाई झाको चरित्रहत्या गर्न सहयोग पुग्ने योजना रहेको स्रोतले बतायो । एक तीर दुई निशाना भनेजस्तो गरी यो घटना गराइएको छ । ‘एकातर्फ झाको चरित्रहत्या गर्ने मेयर मेहताको उद्देश्य पूरा हुने र अर्कोतर्फ प्रहरीको तारो बनेका मोजिबुल्लाहलाई तह लगाउने योजना हो’ स्रोतले भन्यो । यसमा सहनी फसे पनि योजनाकारलाई कुनै हानी हुने थिएन ।
एसपीसहितको संलग्नतामा यसरी बन्यो योजना
प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही साताभित्रै एसपीहरुको सरुवा गर्दै थियो । यस क्रममा रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धिविक्रम शाहको पनि सरुवा हुने निश्चित थियो । रौतहटमा आफ्नो कार्यकालतिर उनलाई प्रस्ताव आयो–पत्रकारलाई लागूऔषधको मुद्दामा फसाउने त्यसका लागि उनले आर्थिक लाभ पाउने, स्रोतका अनुसार शाहले पनि यो प्रस्ताव स्वीकार गरे । मोजिबुल्लाह पक्राउपछि एसपी शाहको अर्का पत्रकार सञ्जय सहनीसँग कुरा भएको अडियो रेकर्ड पनि सार्वजनिक भएको छ । अडियो रेकर्डमा शाहले सहनीसँग आफ्नो असईले काम गरेको बताएको स्पष्ट सुन्न सकिन्छ । जसले पनि उनी योजनामा संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार मेयर मेहता र उनका भाइ मोहन मेहताले पत्रकार मोजिबुल्लाहलाई प्रहरीको संलग्नतामा फसाउने योजना बनाएका हुन् । मोहन लागूऔषध तस्करीको आरोप लाग्दै आएका व्यक्ति हुन् । २०७६ मा मकवानपुरको हेटौंडमा मोहन अध्यक्ष रहेको डुमरिया स्वास्थ्य चौकीको एम्बुलेन्सबाट गाँजा बरामद भएको थियो । त्यसक्रममा तीन जना पक्राउ परेका थिए ।
तिनै मेहताको दाजुभाइबाट आर्थिक लाभ पाउने भएपछि एसपी शाहले पनि सहयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ । शाहकै निर्देशमा घुमुवा प्रहरीले स्थानीयलाई प्रयोग लागूऔषध राख्न लगाएको स्रोतले बतायो । घटनाको समयमा भने शाह बिदामा बसेका थिए ।
कहाँबाट आयो लागूऔषध
घुमुवा प्रहरीले पत्रकार मोजिबुल्लाहको मोटरसाइकलमा लागूऔषध नाइट्राभेट राख्न लगाएको सार्वजनिक भएको छ । यो सीमापारि भारतमा खुल्लमखुल्ला पाइने लागूऔषध हो । तर, नेपालमा प्रतिबन्धित छ सीमा क्षेत्रमा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति तथा यस्तो लागूऔषध बारम्बार बरामद हुने गरेको छ ।
मोटरसाइकलमा राख्न प्रहरीले यस्तो लागूऔषध कहाँबाट ल्यायो भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ । प्रहरीले यदि बरामद भएकै लागूऔषध प्रयोग गरेको हो भने यसअघि पनि त्यसरी बरामद भएको लागूऔषध प्रहरीले झिक्ने गरेको आरोप लाग्ने भएको छ । यदि त्यसो होइन भने यो लागूऔषध पत्रकारलाई फसाउनकै लागि भारतबाट नै ल्याउन लगाएको देखिन्छ । यस प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीले प्रयोग लागूऔषधको स्रोतको विषयमा पनि अहम् बनेको छ ।
के भन्छन् आरोपित र छुटेका पत्रकार
हिरासतबाट छुटेका पत्रकार मोजिबुल्लाहले आफूलाई फसाइएको र प्रहरीले आफ्नो कुरा पनि नसुनेको बताएका छन् । उनले अझै पनि आफू असुरक्षित रहेको सामाजिक सञ्चालमा उल्लेख गरेका छन् ‘म आफू असुरक्षित महसुस गरिरहेको छु ।
मलाई फसाउनका लागि षड्यन्त्र गर्ने व्यक्तिहरुले कुन बेला के गर्छ केही थाहा छैन हजुरहरुसँग सुरक्षाको आश गर्दै छु । मुजिबुल्लाहले समाजिक सञ्जालमा लेखेका यस्तै अर्का पत्रकार सहनीले आफू निर्दाेष रहेको र फरार नरहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । उनले आफूसँग भएको प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास भइरहेको पनि जनाएका छन् । ‘म निर्दोष रहेको र मसँग भएको प्रमाण नष्ट गर्न धेरैले प्रयास गरिरहेको भएता पनि सुरक्षित राख्ने र सुरक्षित हुने कोसिसमा छु । म आफैं सुरक्षित नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले लेखेका छन् ।
किशोरीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा युवक पक्राउ
बझाङ : बझाङमा एक किशोरीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको अरोपमा एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मष्टा गाउँपालिका–२ खिकलाका १९ वर्षीय राजेन्द्र बिक रहेका छन् ।
उनले यहि भदौ ४ गते शुक्रबार बेलुकी सोही ठाउकी १६ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ । राजेन्द्रले धारामा पानी भर्न गएकी किशोरीलाई बाटोबाटै तानी आफनो गोठभित्र लगेर जबरजस्ती प्रयास गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको बझाङ प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक कमलप्रसाद चौधरीले मध्यान्हलाई बताए ।
बलात्कार प्रयास भएको सूचना प्राप्त हुनासाथ राजेन्द्रलाई भदौ ५ गते पक्राउ गरी जवरजस्ती करणी उद्योग शिर्षकमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक चौधरीले बताए ।
यस्तै गत असोज ८ गते घरबाट गोठ हिँडेकी मष्टा गाउपालिका २ खिकालाकै १२ वर्षीया सम्झना कामीलाई सोही गाउँको शिव मन्दिरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो । उनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा खिकालाकै राजेन्द्र बोहरालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । उनी हाल बाल सुधार केन्द्र दिपायलमा छन् ।
रौतहट लागूऔषध घटनामा प्रहरी प्रमुख शाहको समेत संलग्नता !
रौतहट : रौतहटमा विभिन्न षड्यन्त्र गरी निर्दाेष पत्रकारलाई लागूऔषध कारोबारमा फसाएको घटनामा रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धिविक्रम शाह समेत संलग्नता देखिएपछि जिम्मेवारीबाट हटाइने भएको छ ।
गत साउन ३२ गते निर्दोष पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागूऔषध राखिदिएर पक्राउ गरिएको प्रकरणमा (एसपी) शाहको समेत संलग्नता रहेकोले उनीमाथि छानविनका लागि जिम्मेवारीबाट हटाउन लागिएको हो । घटनामा संलग्नता देखिएकाले शाहलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तान्ने गरी उनको ठाउँमा नयाँ एसपी पठाउने तयारी गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार घटनामा शाहको संलग्नताबारे छानविन गर्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कृष्ण महतको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा कानूनी शाखाका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतलगायत सदस्य रहने छन् ।
निर्दाेष साबित भएर रिहामुक्त भएका पत्रकार मोहम्मद मोजिबुल्लाहलाई फसाइएको घटनामा एसपी शाहको संलग्नता रहे नरहेकोबारे छानविन गरेर प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।
यस्तै मोजिबुल्लाहलाई लागूऔषध मुद्धामा फसाएका धिरज यादव र जितेशकुमार यादवमाथि हाल अनुसन्धान भइरहेको छ भने सोही प्रकरणमा संलग्न प्रहरी सहायक निरीक्षक उदयप्रसाद यादव र प्रहरी जवान मनोज शाह समेत निलम्बनमा परिसकेका छन् ।